ကလေးဘယ်အချိန်လႈပ်လဲ | OnDoctor
By OnDoctor Editor	 On May 4, 2019
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ စိတ်လႈပ်ရှားဆုံးအချိန်သည် မိမိရင်သွေးလေး ပထမဆုံးအကြိမ် လူပ်ရှားမႈကို ခံစားရသောအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ သားဦးအမေများအနေနှင့် ကလေးလႈပ်ရှားခြင်းကို သတိထားမိဖို့ရန် မသဲကွဲပါ။ ကလေးလႈပ်ရှားလား ? အစာမကြေတာလား? ဗိုက်ထဲလေများနေသလား? စသည်ဖြင့် စိတ်ရှုပ်ရတတ်ပါတယ်။
သို့သော် မိခင်များအနေဖြင့် မိမိရင်သွေးလႈပ်ရှားသည်ကို ကလေးလႈပ်သွားသည်ဟု ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ႏူးညံ့သော လႈပ်ရှားမႈများခံစားရပါက ကျန်းမာသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း လက္ခဏာရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်များက ကိုယ်ဝန်ရင့်လာလေလေ မိမိရင်သွေးလႈပ်ရှားမႈကို ဂရုတစိုက်သတိပြုရန် ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ ဘာလို့အဲလိုညွှန်ကြားရသလဲဆိုတော့ ကလေးလႈပ်ရှားမႈ ရုတ်တရက် သို့မဟုတ် ဖြေးဖြေးချင်း နည်းလာခြင်းသည် ကလေးအတွက် စိုးရိမ်စရာအနေအထားတစ်ခုကြောင့်ဟု ယူဆရနိုင်သောကြောင့်ုဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် ခံစားရသော လႈပ်ရှားမႈမှန်သမျှကို ကလေးလႈပ်ခြင်းဟုဆိုပါတယ်။
ပထမ ၁၈ ပတ်မှ ၂၀ ပတ်သည် မိခင်အနေဖြင့် ကလေးလႈပ်ရှားမႈကို ခံစားရခြင်းမရှိနိုင်ပါ။ သတိလည်းမထားမိပါ။ ထိုကဲ့သို့ လနုစအချိန်တွင် ကလေးသည်လည်း ကြီးထွားမႈမရှိသေးဘဲ လုံလောက်သော အားမရှိသောကြောင့် လူပ်ရှားမႈများကို သတိထားမိဖွယ်မရှိပါ။
သို့သော်ကိုယ်ဝန်ဆောင်သော အကြိမ်အရေအတွက်ကြောင့်လည်း သတိထားမိခြင်း မမိခြင်းအပေါ် သက်ဆိုင်ပါတယ်။သားဦးကိုယ်ဝန်ဆောင်သောသူများသည် ကိုယ်ဝန် ၂၅ ပတ်အထိ ကလေးလႈပ်မလႈပ် သေချာသတိထားနားလည်ခံစားမႈ မရှိသေးပါ။ သားနှောင်းကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်များအနေဖြင့် ကိုယ်ဝန် ၁၃ ပတ်ခန့်စောပေမယ့် ကလေးလႈပ်ရှားမႈကို သေချာခံစားရနိုင်ါတယ်။
အခြားသောအချက်များဖြစ်တဲ့ အချင်းအနေအထား၊ အမွှာပူးနှင့် မိခင်ကိုယ်အလေးချိန် စသည်တို့သည်လည်း ကလေးပထမအကြိမ်လႈပ်ရှားမႈ သိမသိအပေါ်သက်ရောက်မႈရှိပါတယ်။ ဥပမာ အချင်းအရှေ့ရောက်နေသော ကလေးသည်အနောက်ရောက်သောကလေးထက် လႈပ်ရှားမႈကိုသိရန် နောက်ကျတတ်ပါတယ်။ ကလေးတစ်ဦးထင်ပိုရျ် လွယ်ထားသေ ာမိခင်သည် စောစီးစွာလႈပ်ရှားမႈကိုခံစားရပါတယ်။
ကလေးလႈပ်သည်ဟူသောခံစားမႈသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မတူညီပါ။
– လေနာကဲ့သို့ ခံစားရခြင်း
– အစာအိမ်ထဲတွင် လိပ်ပြာတိုးသကဲ့သို့ တဖျတ်ဖျတ်ဖြစ်ခြင်း
– လေပူဖောင်း ပေါက်သကဲ့သို့ ခံစားရခြင်း
– ရေပွက်ကဲ့သို့ ပွက်သကဲ့သို့ ခံစားရခြင်းစသည်ဖြင့် ခံစားချက်မျိုးစုံခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတိုးခြင်းသည် ကိုယ်ဝန်ရဲ့နေရာမျိုးစုံ အားမျိုးစုံဖြင့် ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အများစုသည် ဗိုက်အလယ်တွင် အများအားဖြင့်လူပ်သည်ကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကိုယ်ဝန်ရင့်လေလေ ကလေးတိုးသည်မှာ အားပြင်းလေဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတွင် အခြားသူများ စမ်းသပ်ကိုင်တွယ်သည်နှင့် ကလေးတိုးခြင်းကို ချက်ချင်းတွေ့ထိခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အစောပိုင်းကာလအတွင်း ကလေးအခြေအနေသိရှိရန် အတ်ထရာဆောင်းရိုက်ကြည့်လျှင် ကလေး အသက်ရှင်သည်ကို အလွယ်တကူသိနိုင်သော်လည်း လႈပ်ရှားမႈကိုတော့ မခံစားရတတ်ပါ။
လရင့်လာသောအခါ ကလေးလႈပ်ရှားမႈသည် အားကောင်းလာပြီး မိခင်အနေဖြင့် လႈပ်ရှားမႈကြောင့် နေထိုင်ရအဆင်မပြေသော အနေအထားထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကလေးတိုးခြင်းကြောင့် ဆီးအောင့်ခြင်ူစသည်တို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကလေးလႈပ်ရှားမႈသည် အားပြင်းသောအခါ မိခင်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကို တွန်းခြင်းဖြစ်စေခြင်းကြောင့် အသက်ရှုရန်ခက်သောအနေအထားထိ ဖြစ်လာတတိပါတယ်။
ကလေးတိုးခြင်းသည် ကလေးကျန်းမာရေးကောင်းမကောင်းကိုလည်း ညွှန်ပြသော အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတိုးခြင်းခံစားရနိုင်သော အချိန်များမှာ
– ည ၉ နာရီနှင့် မနက် ၁ နာရီ
– အအေးသောက်ပြီးနောက် အချိန်တွင်ပိုမို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
မိခင်အနေဖြင့် ကလေးလႈပ်ရှားမႈပုံစံသည် မိခင်တယောက်အတွက် များစွာအထောက်အကူရပါတယ်။ အကယ်၍ မိခင်သည်လႈပ်ရှားမႈပုံစံပြောင်းလဲသည်နှင့် ဆရာဝန်နှင့်ချက်ချင်းသေချာပြသင့်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ကလေးလႈပ်ရှားမႈသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအတွက် မိခင်နှင့်ကလေးအကြား ဆက်သွယ်မူပေးသော အရေးပါသော အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။